စမတ်နာရီ (Android, Apple နှင့်အခြားသူများ) တွင်ဂီတကိုမည်သို့နားထောင်ရမည်နည်း ulator Emulator.online ▷▷
စမတ်နာရီတစ်ခုကို ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၎င်းကို၎င်းအကဲဖြတ်သင့်သည် ဂီတပြန်ဖွင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း- ၎င်းသည်သင်၏စမတ်ဖုန်းအတွက်အဝေးထိန်းတစ်ခုအဖြစ်သာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်လားသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည် ဂီတကိုလွှင့်သည် သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနားထောင်နိုင်အောင်သီချင်းတွေကိုထပ်တူပြုပါ။
ဤ အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဂီတ applications များ စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့် streaming platform များ၊ ဤမေးခွန်း၏အဖြေသည်သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အထူးသဖြင့်စမတ်နာရီ၌တပ်ဆင်ထားသောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ရွေးချယ်ထားသောဂီတဝန်ဆောင်မှုကိုမဖြစ်နိုင်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များအရအော့ဖ်လိုင်းတေးဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့မှာ Apple နှင့် Google တီထွင်ထားသောစမတ်နာရီများမှမဟုတ်ကြောင်းအခြားအရာများအကြားတွေ့ရပါမည်။
ဤတွင်သင်သိထားရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးဖြစ်သည် စမတ်နာရီ၏စွမ်းရည်သည်သင်၏ဖုန်းမှသော်လည်းကောင်း၊ သီးခြားသော်လည်းကောင်းပါ ၀ င်နိုင်သည်.
အဖတ်ကိုလည်း: အကောင်းဆုံးစမတ်နာရီများ - Android, Apple နှင့်အခြားသူများ
စမတ်နာရီများတွင်စျေးကွက် ဦး ဆောင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါApple နာရီ အသုံးပြုသူအားတေးဂီတနှင့်အခြားအသံအမျိုးအစားများကိုနားထောင်ရန်ရွေးချယ်စရာများကိုကမ်းလှမ်းပါ။ Apple Music အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည်အထင်ရှားဆုံးသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ application သည်သင်၏လက်ကောက်ဝတ်မှတိုက်ရိုက်ဖွင့်ထားသောသီချင်းများကို Apple Watch သို့နားကြပ်ဖြင့်နားဆင်ခြင်းဖြင့်သင့်ဖုန်းတွင်ဖွင့်ထားသောဂီတကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဘလူးတုသ်.
Apple Music ကိုစာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်လွှင့်နိုင်သည် အဆိုပါ catalog ထဲမှာတိုင်းသီချင်း ဒါမှမဟုတ် smartwatch မှာဒီဂျစ်တယ် ၀ ယ်ပြီးသွင်းထားတာတွေအားလုံးကိုကြားပါ။
၀ န်ဆောင်မှုများသည်ရွေးချယ်ထားသောနာရီနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါကတေးဂီတသီချင်းများမှတစ်ဆင့် Apple Watch သို့တိုက်ရိုက်လွှင့်နိုင်သည် ဝိုင်ဖိုင် O LTE ; အကယ်၍ သင်သည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဝေးကွာနေပြီးသင်၏ဖုန်းကိုအိမ်တွင်ထားခဲ့ပါက Apple Watch မှသီချင်းများကိုကြိုတင်စည်းညှိနိုင်သည် ကျွန်တော့်လက်ပတ်နာရီ သင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိ Apple Watch အက်ပ်တွင်တွေ့ရမည် ဂီတ mi သီချင်းထည့်ပါ။ ထပ်တူပြုခြင်းသည်သာအလုပ်မလုပ်ပါApple နာရီ တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။
လည်း Spotify အတွက်သီးသန့် app တစ်ခုရှိသည်Apple နာရီ သင်၏လက်ကောက်ဝတ်သို့တေးဂီတသီချင်းများတိုက်ရိုက်လွှင့်ရန်သို့မဟုတ်အခြားစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်မကြာသေးမီက update ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးပါကယခုသူသည် mobile device နှင့် Wi-Fi များတွင်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ သင့်ဖုန်းမရှိဘဲထွက်သွားနိုင်သည်။
ထို့နောက် app တစ်ခုရှိသည်။ Youtube MusicApple Watch ကိုရည်ညွှန်းသော်လည်းသင်၏ဂီတစာကြည့်တိုက်ကိုလေ့လာရန်နှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်သာအသုံးပြုခဲ့သည်။ အလားတူလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအက်ပ်တွင်တွေ့နိုင်သည် Deezer Apple Watc မှ
၏စမတ်နာရီပလက်ဖောင်း Google သင်အပြည့်အဝထပ်တူပြုခြင်းအထောက်အပံ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်သေးရှိသည် Youtube Music အကောင့်ထဲသို့အချက်ကိုယူပြီးကြောင်း Google ဂီတ Play ဖယ်ရှားထားပြီးအလွန်ထူးဆန်းသည်။ သို့သော်အသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်သည် OS သုံးပါ ၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းချုပ်ရန် Youtube Music သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်
အထက်ဖော်ပြပါသည်ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးနီးပါးနှင့်သက်ဆိုင်သည် - app မရှိပါ OS သုံးပါ ဥပမာအားဖြင့် Apple Watch အတွက်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့် playlist ထပ်တူပြုခြင်းမရှိပါ။
Device တစ်ခုစီတိုင်းသင်၏စမတ်နာရီပေါ်တွင်ပြန်ဖွင့်ထိန်းချုပ်မှုများပေါ်လာလိမ့်မည် အန်းဒရွိုက် application နှင့် podcast မှတဆင့်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုဖွင့်သည်၊ သို့သော်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုစတင်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ခြင်းထက်မကသင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အရာများစွာမရှိပါ။ သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုအမြဲတမ်းသင်နှင့်အတူသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်နေ ဦး မည်။
နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ app တစ်ခုရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောဂီတဝန်ဆောင်မှု OS သုံးပါ es Spotify ၎င်းသည်သင်စံသတ်မှတ်ထားသောပေါင်းစည်းမှုမှတဆင့်ရရှိသောအရာ မှလွဲ၍ အခြားအင်္ဂါရပ်များစွာကိုမပေးနိုင်ပါ အန်းဒရွိုက် နှင့် OS သုံးပါသင်၏သီချင်းစာကြည့်တိုက်သို့သီချင်းများကိုသင်၏နာရီမှထည့်နိုင်သည်။ ပြန်ဖွင့်သည့်ကိရိယာများအကြားကူးပြောင်းနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ကသီချင်းကိုသင့်နာရီသို့တိုက်ရိုက်လွှင့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ အော့ဖ်လိုင်းနားထောင်ခြင်းအတွက်သီချင်းများထပ်တူမပြုနိုင်ပါ။
စမတ်နာရီပေါ်တွင်သီချင်းများဖွင့်ရန် OS သုံးပါ တယ်လီဖုန်းမလိုဘဲ၊ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှု ဒါဟာ application ဖြစ်ပါတယ် NavMusic အရာကထောက်ပံ့ပေးသည် အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးကာလ သင်ငွေပေးချေပြီးသည့်နောက် - ၎င်းသည်သင်၏နာရီပေါ်တွင်ဒေသခံဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းခြင်းအပေါ်အခြေခံသည့် application သေးငယ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် format ဖြင့်လိုချင်သောဂီတကိုရရှိသည်။
Fitbit၊ Samsung နှင့် Garmin တို့ဖြစ်သည်
တစ်ခုချင်းစီကိုဘား Fitbit su အပြန်အလှန် Lite ၎င်းမှချိတ်ဆက်ထားသောစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်တေးဂီတဖွင့်နေစဉ်သင့်အားဂီတကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည် မည်သည့်လျှောက်လွှာ အသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ပါ။ နာရီပေါ်မှာ Versa Lite နှင့် Sense အသစ်နှင့် Versa3မှအပCloud ၀ န်ဆောင်မှုကိုပိုမို ဦး တည်သည်၊ သင်သည်သင်၏ကိရိယာနှင့်ရရှိသောဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းများကိုလျှောက်လွှာမှတဆင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည် fitbit ချိတ်ဆက်ပါ.
ဒါ့အပြင်ဒီအမှု၌ Spotify စမတ်နာရီများအတွက်အထူး application တစ်ခုရည်စူးသည် Fitbit, သို့သော်တစ်ဖန်၎င်းသည်သင့်ကိုအခြားစက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည် - အမှန်မှာ၊ သီချင်းဖွင့်စာရင်းများကိုနာရီနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်မဆိုဤအရာကိုခွင့်ပြုမည့်အပလီကေးရှင်းများ။ Versa Lite မှလွဲ။ငါ Deezer mi ပန်ဒိုရာ။ ထို့ကြောင့်သူ၏ဂီတကိုနားထောင်လိုသော Fitbit အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏ဖုန်းကိုအသုံးမ ၀ င်ဘဲသင် streaming ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂီတဖိုင်များကိုကူးယူရန်လိုသည်။
စီးရီးနှင့်စပ်လျဉ်း Samsung Galaxy Watchလျှောက်လွှာကိုစတင် ဂီတ ဖုန်းမှဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းမှနာရီ၏ထိန်းချုပ်မှုသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ - ဂီတအော့ဖ်လိုင်းကိုနားထောင်ရန်၊ စမတ်နာရီပေါ်ရှိဒီဂျစ်တယ်ပုဒ်များကိုစည်းညှိနိုင်သည်သို့မဟုတ်အက်ပ်ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ Spotify ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်ဗားရှင်း၌တည်၏ prima စမတ်နာရီပေါ်တွင်ဖွင့်ရန်စာရင်းများကိုစည်းညှိနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့စမတ်နာရီရဲ့ကျယ်ပြန့်မှု Garmin သူတို့အားဆင်တူဂီတပြန်ဖွင့်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် Samsungဖြေ - ဒီနာရီတွေကိုသင့်ဖုန်းရှိတေးဂီတအသုံးချပရိုဂရမ်များမှပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန် (သို့) သင်၏ကွန်ပျူတာဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်သည့်ဒီဂျစ်တယ်တေးဂီတကိုဖွင့်နိုင်သည် Garmin Connect ကိုအိမ်မှာသင့်ဖုန်းကိုထားခွင့်ပြု
တူညီသော ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောတစ်ခုတည်းသောဂီတဝန်ဆောင်မှုသည် Spotify နှင့်ကိရိယာများ၌ရှိသကဲ့သို့ Samsungစာရင်းသွင်းသူများ Spotify ပရီမီယံ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုနားထောင်နိုင်ရန်၎င်းတို့သည်ဖွင့်စရာစာရင်းများကိုတစ်ခြား Garmin စက်ပစ္စည်းနှင့်စည်းညှိနိုင်သည်။
အဖတ်ကိုလည်း: 2021 မှာဝယ်ဖို့ဘယ် smartwatch